Umphathi weVolumu- # 1 Mac App Mount Apple & Win Volumes / Shares | Iplum iyamangalisa
Asanda: 7 / 14 / 21
Umphathi weVolumu - # 1 iMac App kwi-Vol-Mount Volumes
Khuphela kwiPlum emangalisayo (ngasentla)
okanye Ivenkile yeMac App (ngezantsi)
Umphathi weVolumu sisicelo seMac OSX esisetyenziselwa ukucwangcisa, ukuzenzekelayo kunye nokubeka esweni ukufakwa kweWindows (SMB) kunye neevolumu ze-Apple / izabelo / iidiski. Kulula ukusebenzisa usetyenziso lweMac ukulawula ukufakwa kweWindows (SMB) kunye nezabelo zeApple. IiLaptops zinokusebenzisa uManejala weVolumu ngesandla okanye ngokuzenzekelayo zonyuse umthamo emsebenzini nasekhaya. Ukucwangciswa okukhethiweyo kokunyusa kukwajonga ukonyuka kunye nesabelo sezabelo. Umphathi weVolumu unokusetyenziselwa ukuvusa iikhompyuter ezilele kwi-ethernet LAN.
Ukuba ufuna ukukhwela iidiski ukusuka kwenye indawo kwinethiwekhi yakho ke uMlawuli weMigangatho unokwenza ubomi bakho bube lula. Umphathi wevolumu wenza kanye oko ikuthethayo, inoluhlu lweevoluyumu (iziqhulo ezinzima kwezinye iikhompyuter) enegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha kwaye uya kuzifaka ngokuzenzekelayo xa ufuna. Kungcono ukuba ijongiwe kwaye iqiniseke ukuba bahlala bephakanyisiwe ukuba imeko yenethiwekhi iyatshintsha.
Amanani okubeka iliso
Umphathi wevolumu unokugcina iliso kwintaba kwaye ukuba iseva ihla (kwaye intaba inyamalala) Umphathi wevolumu uya kulandisa isabelo xa iserver ibuya kwi-intanethi. Nangona kunjalo, ukuze kwenzeke oku, kufuneka ujonge u "Jonga le ntaba uyigcine ifakwe".
Ukucwangciswa okukhethiweyo kokunyusa kukwajonga intaba kunye nokubala izabelo / ivolumu / ukuqhuba.
Umphathi wevolumu unokunyusa izabelo zeWindows xa igama lomsebenzisi lalapha kumncedisi wokwabelana kodwa uMlawuli weVolumu akaxhasi uqinisekiso lweDOMAIN ngeli xesha. Okwangoku sisebenza ngokuSebenza ku-Directory Olusebenzayo kunye nokuqinisekiswa kweServer. Kwakhona, oku akuchaphazeli ii-windows ezingezizo i-DOMAIN windows.
Iiteknoloji zeMac OS X
Umphathi wevolumu usebenzisa uBonjour ukwenza ukuba ivolumu yendawo ibe lula.
Umphathi wevolumu unokuseta ukusebenzisa umsebenzisi omnye wehlabathi kunye negama lokugqitha kuyo yonke imiqulu.
Umphathi wevolumu unokuvusa iikhompyuter kwi-LAN.
Umphathi weVolumu unokucwangcisa ukufakwa kweemoto ngalo naliphi na ixesha kunye nexesha.
Umphathi weVolumu unokubala kwakhona ukuqhuba / izabelo / ivolumu / amanqaku emva kokuphela kombane.
Umthamo weManger unokukhuphela kwiMacUpdate.
IsiKorea, iSpanish, isiFrentshi, isiJamani, isiJapan, isiTshayina, isiUrdu, isiArabhu
Malunga nenkxaso cofa apha.
Emva kokujonga uManejala weVolumu nceda uthenge usetyenziso kwiPlum emangalisayo ivenkile ukuvula onke amanqaku kunye nokuxhasa ukuqhubeka kwendaleko. Emva kokuthenga ufumana ngokuzenzekelayo i-imeyile yokubhalisa enesitshixo selayisensi. Okanye thenga Ivenkile ye-Apple Mac iTunes.
Siyathanda ukuva kuwe. Nceda usithumele izimvo zakho, iingcebiso kunye nee-bugs ukulungisa. Enkosi ngokuxhasa umphathi wevolumu.
Abasebenzi kwiPlum emangalisayo
-lungisa ibug echazwe ngumsebenzisi uMichael Bittner: 'Mount Point sele isetyenziswa'.
-I-AFP yenziwe ukuba ingafumaneki kwabo basebenzisa iMac OS 11 ukubheka phambili. I-Apple ayisayi kuxhasa i-AFP.
-inkxaso eyongeziweyo ye-edsa kwi-sparkle esetyenziswa kwinguqulelo ye-shareware plumamazing.com
- ukongeza i-loginservicekit
- amagama ambalwa aseJamani atshintshiwe ngokuchanekileyo
I-bug encinci elungisiweyo: Xa unyusa isabelo se-SMB ngendawo "yentaba ezi-2" (okt: ividiyo / bhanyabhanya) intaba isebenza kakuhle, kodwa usetyenziso lwenza ingxelo yokuba le ntaba ayisebenzi. Ingxelo yelog iyimpumelelo, kwaye i-macOS ibona isabelo esinyusiweyo, kodwa imeko yesikrini ibonisa "Ayinyuswanga".
- ukongeza kwisiNgesi esenzelwe:
-Idityaniswe njengendawo yokubini yokubini ye-Apple Silicon kunye nee-Intel Macs
-Uhlaziyo lweSakhelo seSparkle.
-Bonisa impazamo kwimeko yendlela engavumelekanga.
Ukulungiswa komcimbi: Khange ujonge kwiirisithi zeapps ngexesha lokuvavanya.
-Kulungiswe impazamo yexesha lokujolisa kwiVolumeManager ekujoliswe kuyo.
-Kulungiswe ukungqubana okwenzekileyo xa i-shareAddress_URL ingekhoyo.
- Incwadi ihlaziyiwe.
- Okungafaniyo. uphuculo
Enkosi kubasebenzisi ngengxelo enkulu
-Umgaqo-nkqubo ohlaziyiweyo we -InServiceKit.
- Umcimbi osisigxina weesiphelo
-oku kusetyenziswa ukhuseleko lwe-Apple notarization entsha
-ilungiselelwe ukusetyenziswa kwememori
-dityaniswe ne-xcode 10.3, usebenzisa isantya-5
-Emva kokuphelelwa kwesilingo, ivolumu yokugcina yabakhubazekileyo inyuswe endaweni yevolumu yokuqala. ilungisiwe
-Imicimbi ekwixeshana ekwabelwana ngayo yesabelo / igama levolumu elitshintshela kwigama langaphambili lesabelo ngelixa umsebenzisi ebhala kumhlaba wokubhaliweyo wethamo.
- yongeza ukungena ekuqaleni
-inguqulelo kwiiphaneli zesethingi ezikhethiweyo
Ngaba ikhona into enokuyenza ngcono iapp? Sazise. Enkosi.
-Ukuphuculwa kokubekwa kweliso kunye nokuchithwa kwemali
-itshintshe ilayisensi ethengiweyo yomyalezo ophumeleleyo
-Umcimbi osisigxina apho ungakwazanga ukwehlisa inani ukuba lendawo kunye nokwabelana ngegama levolumu iyafana.
-I-ui encinci kunye nokulungiswa kopelo.
Umbulelo omkhulu kubasebenzisi bakaDon noKayin. Nceda ugcine ezi ngcebiso ziyeza!
-ngezelelwa ukongezwa kwakhona
-misela impazamo engaphenduliyo ngesixhobo sokutshixa / sokuvula
- yongeza 'ukukhangela uhlaziyo' iqhosha kwizicwangciso.
-Ingozi engalunganga yenzekile ngexesha ukwabiwa kweAddress_URL.
-ifowuni ye-async emiselweyo
-software engabhaliswanga ngoku yenza amanani angcono
-kopa kwaye uncamathisele kwimisebenzi yamaphepha-mvume
Siyayibulela yonke ingxelo. ukuba ufuna ukufumana ibug sazise. Ukuba incwadana yemigaqo ifuna ulwazi ngakumbi sazise. Iingcebiso zakho zinokunceda i-app nayo. enkosi
-uhlaziyo lwenguqulo yokuqala kwi-MountWatcher eyaziwayo ye-Mac
Incwadana yemigaqo yolawulo lwevolumu
Uphononongo olusuka kwiMacUpdate.com
1.9.1 ngowokugqibela onenkxaso ye-AFP